KALA DUWANAANTA CANABKA "BEAUTY" - VITICULTURE
Miyaad xirtaa canabki hore ee xagaaga xagaaga?
Fiiri "Beauty", waxay leedahay isku-dhafka wanaagsan ee sonkorta iyo asaasiga macaan, iyo dhadhanka waa fiican! Grape "Pretty Woman"
Kala duwanaanta caleemaha "Pretty Woman" ayaa waxaa loo weeciyay caleemo caan ah Yevgeny Pavlovsky.
Canabkani wuxuu ka mid yahay noocyada hiwaayadda, maadaama aan noocyo kala duwan loo isticmaalin in lagu shubo, laakiin foomamka miro.
Kala duwanaanshaha "Pretty Woman" waa miro miis ah oo bilawda bilowga. Caleemaha iyo geedka canabka ah ayaa si buuxda u ruxmaya. Dhirta canabka ah sredneroslye, ubax - bisexual. Bushes kala duwan "Beauty" waa nidaam xididdo badan oo qoto-dheer oo u oggolaanaya in uu koro oo uu dhaqso u dhaqo.
Canabku wuxuu leeyahay midhaha ugu quruxda badan uguna weyn, muuqaalka cajiibka ah ee muuqda ee canab. Miisaanka mid berri ah waa qiyaastii 7 garaam. Qaab dhismeedka, waxay yihiin kuwo sarreeya, caarada ayaa si tartiib ah u fiiqan. Midabku waa casaan mugdi ah, talooyinkuna waa guduud. Canabka canabku waa mid fiican, oo isdhaafsan, wuxuu ku badan yahay carafka nutmeg.
Berry waa macaan, casiir leh. Dhammaadka ayaa ah mid furan, nuugan, mararka qaarkood waxaa jira dhadhan dhan. Peel si fudud ayaa loo cunaa. Mararka qaarkood way qarxi karaan. Canab waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo casiir, qalajiyeyaal qalalan. Seeds ee berry ah marna ma dhicin.
Kala duwanaanta caleemaha "Beauty" waxay leedahay bandhig bandhig ah. Cadaadiska qanjiradu waa dhexdhexaad, iyo iska caabbinta barafu wali si buuxda looma baarin.
Kooxaha "Pretty Woman" waa nooc qurux badan, oo ah cufnaanta dhexdhexaadka ah. Miisaanka ayaa gaari kara 700 garaam. Foomkooda waa mid dheer oo cidhiidhi ah.
Wax-soo-saarka waa mid dhexdhexaad ah, deggan.
Kala duwanaanshaha canabka "Pretty Woman" waa noocyo kala duwan oo berry ah oo dillaacaya. Ka dib 110 maalmood laga bilaabo bilowga boomaha ugu horreeya, waxaad bilaabi kartaa goosashada.
Faa'iidooyinka kala duwan ee "Beauty" waa:
I. Aragtida qurxinta ee kooxaha.
Ii. Canab quruxsan oo leh dhadhan aan dhabar jabin oo laga sameeyey.
Iii. Cunto tayo sare leh oo tayo leh.
Si aad u yar oo canab ah "Beauty" waxa loola jeedaa:
I. Celceliska iska caabinta cudurada qaarkood.
Ii. Sanadaha roobabka, canabku wuu jajabi karaa.
Fasalka "Pretty Woman", sida noocyo kale oo canab ah, waxaa loo tixgeliyaa geedka qorraxda jecel iyo iftiinka jecel. Wuxuu u baahan yahay kuleyl badan. Qodob kasta oo ku habboon canab, laakiin hubso inaad doorto qorshe leh dheecaan aad u fiican. Cudurka daboolka ah waa celcelis. Wixii beerto geedka canabka ah ku haboon koonfurta iyo koonfur-galbeed. Gobollada woqooyiga, noocyada kala duwan ee Krasot waa in lagu koraa xayndaabka ama derbiga.
Ha ku beerin canab meelaha meelaha hawadu qabow tahay.
Fikradda beerashada canabku waa xayawaan ama xayawaan cagaaran, dhagax ama xayr. Waa noocyada noocan ah ee ciidda in tayada berry ay u taagan yihiin. Meelo leh dhulluxyo badan oo salinees ah iyo dhulluxyo qulqulaya ma shaqeyn doonaan, meelaha ay heerarka dhulka hoose ku gaaraan 1.5 mitir ka soo ifbaxa dhulka.
Ka hor inta aanad bilaabin shaqo beerto waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka. Goobtu waxay ku dhajisaa, oo la qaadaa xaddidaadda carrada. Carrada waxaa la bacrimiyey leh digada, humus, kakan ee fitamiinada bacriminta waxaa lagu dabaqaa carrada saboolka ah.
In ceelka beerto, si loo hagaajiyo tayada ciidda iyo si loo hagaajiyo aeration ay, burburka ku qastay ciidda ama ciid waxaa la soo bandhigay. In ciidda, kuwaas oo ku jira fosfooraska yar, inta badan carrada clayey ama chernozems culus, superphosphates lagu daray godka.
Marka la dooranayo meel leh carrada ciidda, waa in la xasuustaa in ay ku jiraan tiro yar oo Bacriminta nitrogen. Sidaa daraadeed, nitrogen waxaa lagu daraa dheecaan, laakiin dheecaan aan laga samayn dhagaxyada, tan iyo ciidda bacaadka leh hanti wanaagsan oo wanaagsan.
Ka hor inta beerto canab "Pretty Woman" ciidda ciidda lagu bacrimiyo digada ama humus, waxaad ka dhigi kartaa peat ama compost. Intaa waxaa dheer, godadka beerto waxa lagu bacrimiyay superphosphate si heer sare ah uga badbaado.
Noocyada dhirta "Pretty Woman" ayaa lagu beeray qoto dheer illaa 50 illaa 60 cm si loo ilaaliyo nidaamka asaasiga ah. Tani waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qoto dheeraanta ugu fiicnaanta, markaa ciidda si dhakhso ah ayey u kululeysaa, dusha sarena waa mid bacrin ah, qiyaasta biyaha iyo Bacriminta macdanta ayaa hoos u dhacaya.
Marka laga beerto seedling ah ee dhulka, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh, hubi in meesha of grafting of canab (haddii ay jirto) ayaa ka sareeya heerka dhulka. Beer caleenta lagu beeray waa in lagu xiraa taageero, kaas oo horay loo geliyey daloolka, oo la waraabiyey saddex baaldiyo oo biyo ah hal baadiyaha ah, iyo mulch ciidda si loo ilaaliyo qoyaanka.
Marka laga beerto canab ku dhow derbi ama xayndaab, duurka ayaa laga beeray midba midka kale ee fogaan ah 1.2 mitir, iyo aag furan oo leh dhexaad ah 1.5 mitir.
Canab "Pretty Woman" ayaa bilaabata in la beero guga ka hor bilowga fasaxa biiyaha.
Si aad u daryeesho canabka "Pretty Woman" waa mid sahlan oo fudud. Wuxuu u baahan yahay waraabinta, mulching ee ciidda, hoyga jiilaalka, qaadashada tallaabooyin ah ee manjooyin, soo bandhigidda bacarimiso iyo fitamiinada bacriminta, ilaalinta cayayaanka iyo cudurada.
Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya ee koritaanka, canab ah si joogto ah u waraabiyo. Maalmaha daruuraha iyo roobabka, heerka cabitaanka waa toddobo maalmood oo kasta. Laakiin marka kulaylku ka baxsan yahay, kulaylka iyo hawada qallalan ee canabku waa la waraabiyaa maalin kasta.
Laga soo bilaabo sanadka labaad, ku dabool laba nooc oo waraabinta joogtada ah: biyo qaboojin iyo qudaar. Biyaha canabku ka hor inta uusan ubxin burooyinkeeda, ka dib markii uu yaraaday, iyo inta lagu guda jiro koritaanka berry. Dhamee noocyada waraabinta "Pretty Woman" toddobaad ka hor koritaanka dhirta oo buuxa.
Mulch ciidda ku wareegsan canabkiinna. Munaasabaddaani waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa qoyaanka noolaha ee carrada, yareeya qadarka koritaanka weelka, xoojinta geeddi-socodka naqshadaynta, taas oo ah, in la isku daro xeryaha nitrogen ee nafaqada ah ee la sameeyay iyadoo ay sababtay ficilkii bakteeriyada faa'iido leh. Waxaad awoodi kartaa wax kasta: caws, digo, humus. Mulching waxay kor u qaadi kartaa koritaanka canab iyo kordhinta wax-soosaarkooda.
Beeraha canjeerada leh ee cawsku waa in lagu dhajiyaa maskaxda, sida jiirka, sida jiirarka, ayaa laga yaabaa inay muuqdaan. Si looga hortago dhacdooyinkooda, waxay horay u sameeyaan dabin ama sunta hoostiisa.
Maadaama aysan si buuxda u fahmin cilaaqaadka kala duwan ee "Pretty Woman" ee dhaxanta daran iyo cimilada qaboobaha, waxaa lagula talinayaa in ay hoy u noqoto, gaar ahaan haddii ay jiraan baraf barafaysan oo gobolka ka mid ah. Niyadjab yar ayaa laga sameeyaa canabkiisa, jirkiisa waxaa lagu daboolay dhulka iyo lakabka balka, meel baaldi ah. Dhoobleey ayaa si fiican u ilaalisa kuleylka. Iska yaree geedka canabka ah waa la goostay waana la xidhxidhay xirmo, kaas oo si ammaan ah loo dhigo dhulka. Xagga sare waxaa lagu daboolay kartoon, kartoonada ka sameysan sanduuqyada cookies, macmacaanka ayaa sidoo kale ku haboon. Cidhifyada kaararka waa in lagu rusheeyaa dhulka ama balka.
Cinabta hoyga ayaa laga saaraa ka dib barafka dhalaalaya, laakiin maaha ka hor Abriil.
Geedka geedka canabka ah wuxuu saameyn ku yeelanayaa helitaanka wax-soosaar tayo sare leh sanad walba.
• Sanadka beerto, qeybta hore ee bisha Agoosto, dusha sare ee caleemaha ayaa laga saaraa. Ka dib markii caleemaha ku dhacaan geedka canabka ah, 3 ama 4 burooyinkeeda ayaa tagay, wax kasta oo sarreeya waa la jaraa.
• Sannad labaad, xilliga dayrta, 4 ka mid ah geedaha ugu awoodda badan ayaa lagu soo xushay geedka canabka ah, 5 kudood ayaa loogu tala galay iyaga. Dhammaan caleemaha daciifka ah oo qalalan ayaa kudara.
• Sanadka saddexaad ee koritaanka dhirta xilliga dayrta ee geedka canabka ah waxay ka tagayaan mid ka mid ah sprouts ugu awoodda badan, kaas oo la gooyo 5 budo.
Iyada oo la jarayo si sax ah, geedka canabka ah ee "Pretty Woman" oo afar jir ah waa inuu leeyahay 4 canab khudradeed. Kordhi awoodda baadiyaha adoo kordhinaya caleemaha miraha ee isku geed la mid ah 3 gogo ', isla markaana waxaa loo baahan yahay in la kordhiyo tirada canabkiinna ka soo baxa xididada.
Kala duwanaanta canabka "Beauty" waxay ubaahantahay bacrimin iyo bacarimiso. Sannadka ugu horeeya ka dib markii laga beerto, canabku uma baahna bacriminta, sababtoo ah waxay ku quudineysaa waxyaabahan faa'iido leh ee la soo bandhigay inta lagu guda jiro saarista beero canabka ah.
Waqtiyada kala duwan ee xilliga sii kordhaya, canab waxay u baahan tahay qiyaas ka duwan bacriminta. Tusaale ahaan, bilawga guga waxaa jira dhisme xoog leh oo ka mid ah nidaamka xididka, caleemaha iyo tiro cagaaran, canabku waxay u baahan yihiin tiro badan oo ah Bacriminta nitrogen. Inta lagu jiro xilliga ubax iyo bislaanshaha canab, noocyada kala duwan ee "Pretty Woman" waxay u baahan tahay in lagu daro fosfooraska iyo potassium, taas oo hagaajinaysa sumcadda sonkorta, iyo ka qayb qaadashada korriin ka fiican ee caleemaha.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, isla mar ahaantaana qashinka dayrta ee xilliga dayrta, waxaa la soo saaraa maaddada organic: digada, compost ama peat.
Laakiin Bacriminta macdanta, foomka qalalan iyo dareere ah, ayaa la sameeyaa sanadkiiba. Guga, ka hor inta aan laga gooyin hoyga duurka, amooniyam ammonium, superphosphates iyo potash cusbo ayaa la soo bandhigay. Canab waxaa sidoo kale quudin bil ka hor bilowgii ubax, dhammaadka May. Bacriminta macdanta waxaa laga codsadaa: amooniyam amooniyam, superphosphate iyo cusbo potassium, oo hore u kala direy biyaha. Ku shub xalkani gawsaha gacmaha ee dhexda u dhexeeyay safafka.
Fasalka "Pretty Woman" ayaa la quudiyay iyo ka hor bilawga canabka bisil. Bacriminta waxaa lagu dabaqaa qaabka xalalka. Cusbada Potassium iyo superphosphate ayaa loo isticmaalaa. Mararka qaar halkii laga isticmaali lahaa qoryaha alwaax qoryaha ayaa loo isticmaalaa.
Canabka quudin karo iyo waa inuu noqdaa Bacriminta organic. Feker ahaan waa slurry, shimbir shimbir, compost, digada lagu qasi karo biyo. Under kasta baadiyaha u samee 1 baaldi isku dar ah.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada ugu wanaagsan ee canab hore.
Canab "Pretty Woman" waxay u baahan tahay kahortaga iyo ka badbaadinta cirbadaha, caarada, kalluunka casaan iyo oidiyoon.
Xuddunku waa mid aad u dhib badan oo canab ah. Waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo ayaa loo isticmaali karaa ilaalinta, laakiin waxay kale, marka laga reebo natiijooyin waxtar leh (ka takhalusidda cayayaanka), waxay dhaawici kartaa qof ahaan adigoo cunaya berry.
Habka ugu fudud uguna badbaha leh ee lagu ilaaliyo dhirta canabkana waxaa loo tixgeliyaa bacda faashad, taas oo si sahlan u toosto naftaada. Boorsooyinka daboolka ayaa si sahlan loo geliyaa rucubood. Natiijo ahaan, dhammaan berry waa mid cidhiidhi ah.
Waxaad qabanqaabin kartaa oo ku dabooli kartaa qolofta. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal saxan yar oo biyo ka buuxsamo, 250 garaam, oo aad u baahan tahay inaad ku darsato sonkorta, qiyaastii 3 qaado. Barmiilaha sharoobada waxaa la dhigaa dhulka oo u dhow duurka, boodhada, gudaha ku soo galaan, u dhintaan, sababtoo ah ma soo laaban karaan.
Caanaha ayaa muuqda qaabka dhibco ee qaybta sare ee caleen, waxaana lagu daboolay taabashada mycelium hoose. Waxay ku faaftaa caleemaha, ugxan-yarta, ka dibna way engegaan oo ay dhacaan. Ruuji beeraha canabka ah ee Radomil ama Amistar.
• Qamadi ciriiri
Kalluunta Gray waxaa lagu muujiyaa qaabka fungus. Dhammaan caleemaha cagaaran ayaa la saameeyaa - caleemaha, dhibco madow muuqata iyaga. Gaar ahaan halista laf-misaanku waxay kordhisaa inta lagu jiro xilliga roobka. Wixii ilaalinta caleemaha canabka ah ee xilli ciyaareedka waxay ku qaataan 3-4 daaweyn, iyaga ku buufin leh fungicides sida Ronilan, Rowral, Sumileks.
Cudur kale oo halis ah oo canab ah waa oidium. Waa halis inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Waxaa muuqata qaabka dhibco iftiin ah caleemaha, taas oo kordhisa cabbirka. Canab waxaa lagu daboolay ubaxyada, bilaabaan inay jajabaan oo kallanaato. Miraha saamaynta leh iyo caleemaha dhicid. Xaraashka waxaa lagu buufin karaa fungicides sida Thanos ama Profit.